लुगा र झोला - Print Peppermint
विशेष घटनाहरू, कर्मचारी वर्दीहरू, र रमाईलो उपहारहरूका लागि मिल्दो थ्रेडहरूका साथ आफ्ना ग्राहकहरूलाई खुशी पार्नुहोस्।
घर / लुगा र झोला
लुगा र झोलासँग सम्बन्धित रोचक लेखहरू
आज, बच्चाहरूका लागि धेरै ब्रान्डका कपडाहरू छन्। होम-आधारित उत्पादनहरू उनीहरूको पैसाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय रन दिन्छन्; यद्यपि, आफ्ना साना बच्चाहरूको लागि सबै भन्दा राम्रो दिन उत्सुक आमाबाबुले अझ बढीको लागि सोधिरहेका छन्। शैली, रंग र फिटको साथ बाहेक, अभिभावकहरूले अब अधिक दिगो कम्पोनेन्टहरूको साथ-साथै अन्डररेटेड खोजी गर्दै छन् ... थप पढ्नुहोस्
FAQs - लुगा र झोलाहरू
म कसरी कपडामा ह्या hangग ट्याग संलग्न गर्न सक्छु?
यदि तपाईं आफ्नो कपडाको व्यापारमा ह्याङ्ग ट्याग संलग्न गर्न चाहनुहुन्छ भने, त्यहाँ त्यसो गर्नका लागि केही तरिकाहरू छन्। पहिलो विकल्प, जुन सबैभन्दा सजिलो तरीका हो, तार वा कर्डको टुक्रा प्रयोग गर्दैछ। ह्याङ्ग ट्यागको प्वालबाट कर्ड तान्नुहोस् र पछि लूप बनाउनुहोस्। डोरीमा फोल्ड गर्नुहोस् ... थप पढ्नुहोस्
स्टेशनरी डिजाइनमा के समावेश छ?
स्टेशनरी डिजाइनमा के समावेश छ? तपाईंको ब्रान्डको गडबड, अव्यवसायिक र असंगत प्रतिनिधित्वले विपत्तिको हिज्जे गर्न सक्छ। त्यसैले तपाइँसँग तपाइँको ब्रान्ड छवि संग पङ्क्तिबद्ध अनुकूलन डिजाइन स्टेशनरी हुनुपर्छ। स्टेशनरी डिजाइन किन अझै सान्दर्भिक छ? महत्वपूर्ण पहिलो छापको रूपमा विज्ञापनहरूको बारेमा सोच्नुहोस्। एक पटक तपाईंको नाम त्यहाँ बाहिर भएपछि, सामाजिक रूपमा अनलाइन अवसरहरूमा… थप पढ्नुहोस्
कहिले र कसरी मैले मेरो कलात्मक मापन गर्नुपर्दछ फाईल प्रबन्धन योग्य आकारमा राख्न?
तपाईंको कलाकृति मापन गर्दा यसलाई अझ व्यवस्थित आकार-वार बनाउन सक्छ, यो सधैं आकार निर्दिष्टीकरण परिवर्तन गर्न आवश्यक छैन। यदि फाइल धेरै ठूलो छ भने तपाईले सानो स्केल मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ। यहाँ विभिन्न प्रकारका कलाकृति र प्रिन्ट सामग्रीहरू छन्, र प्रत्येकलाई कसरी मापन गर्ने: भेक्टर आर्ट ग्रान्ड ४ म्याटले ठूला बाहिरी ब्यानरहरू छाप्न सक्छ ... थप पढ्नुहोस्